Rosia : Nampiharina amin’ny olana an-drenivohitra ny fanentanana an-tserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2018 23:18 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Filipino, Español, Français, русский
Mampandray anjara ireo vondron’olona amin’ny adihevitra sy ny famahana ireo olana samihafa ny crowdsourcing , izay ahitana ny ady amin’ny famaizana trano ka hatrany amin’ny fanarahamaso ny fizotran’ny fifidianana.
Tetikasa iray natomboka voalohany tany Perm ny StreetJournal.org ary nampiharina tany amin’ireo tanandehibe Rosiana. Nahatratra hatrany amin’ny 8.000 ny isan’ny tatitra momba ny olana navoaka an-tserasera ary maherin’ny ampahatelony no efa voavaha. Olom-pirenena tsotra no mpisera ao amin’ny sehatra, ary hita ao ihany koa ny manam-pahefana ao an-toerana, ary ahafahana manara-maso ny asan’ireo mpandraharaha sy mamaly haingana ireo fangatahana amin’ny fomba mahomby tsy misy mpanelanelana ny sehatra.
Tetikasa iray hafa natokana ho an’ny olana tranainy momba ny haratsian’ny làlana sy ny fotodrafitrasa ary ny sampandraharaha an-drenivohitra ny DaïSignal (« Omeo ny fanairana »). Avy any amin’ireo tanàndehibe sy faritra miisa 220 mahery no hiavian’ireo vaovao an-tserasera ao amin’ity vavahadim-baovao ity.
Omen’ny tranonkala amin’ny teny Anglisy FixMyStreet ny ohatra tsara iray mampiseho ny fahombiazan’ity rafitra ity izay manangona tatitra maherin’ny 1.600 miaraka amin’ny sary sy ny lahantsary mampiseho ireo fako miparitaka ivelan’ny fitoeram-pako, ny lalana fandehanan’ireo mpandeha an-tongotra feno lavadavaka, ary ireo graffitis izay tsy azo atao.
Loharanon-dahatsoratra (amin'ny teny Rosiana)